Cessna nevesi Excel XLS + FSX & P3D ailerons / moya ezingasebenzi kakuhle
umbuzo Cessna nevesi Excel XLS + FSX & P3D ailerons / moya ezingasebenzi kakuhle
iinyanga 1 kunyaka 8 eyadlulayo #648 by julian1245
Sawubona Rikoooo ndingathanda ukukubuza abantu malunga nale moya. Ndiyayithanda le moya kwi-MFSXS kwaye kulungile kodwa ukubona ingxaki ngendiza endiyikhathazayo ngokwenene. I-glitch kunye ne-ailerons apho ujike khona njengama-spazz. I-plane iyajika kodwa ibonakala ingenangqiqo ndandijikeleza ukuba unako, naliphi na ithuba, ujonge kwaye uyilungise njengenguqu ehlaziyiweyo okanye into endiyithandayo ngokwenene ukuba ikulungiselelwe kuba im ihlekisa kakhulu ngelo moya. Andiqinisekanga ukuba kukho into emdlalweni okanye okanye xa wenza into engalunganga xa ndiyifaka.
Ndiyabonga ndizise ukuba unayo nayiphi na imbono.
Ixesha ukwenza page: 0.871 imizuzwana